Nzọụkwụ 7 iji mepụta vidiyo na-egbu egbu | Martech Zone
Anyị na-arịgo elu ihe vidiyo na-ese maka otu n'ime ndị ahịa anyị n'oge a. Ha nwere ọtụtụ ndị ọbịa bịara na saịtị ha, mana anyị anaghị ahụ ka ndị mmadụ na-arapara ogologo. Onye nkọwa dị mkpirikpi ga-abụ ngwa ọrụ zuru oke iji kesaa iji nweta nkwupụta bara uru na iche gafere ndị ọbịa ọhụụ n'ụzọ dị egwu.
Nnyocha na-egosi na ọchịchọ ndị ahịa maka ọdịnaya vidiyo amụbawo nke ukwuu, yana 43% chọrọ ịhụ vidiyo ndị ọzọ n'aka ndị ahịa. Vidio na ọdịnaya animated abụrụla ihe dị oke mkpa na usoro ntụgharị, yana 51.9% nke ndị ahịa na-ekwu na vidiyo nwere ROI kacha mma ma e jiri ya tụnyere ụdị ọdịnaya ndị ọzọ. N'ezie, ọdịda peeji nke na vidiyo na-eduga 800% ntụgharị ọzọ. MicroCreatives
MicroCreatives, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe okike na-arụ ọrụ zuru oke, mepụtara ihe ọmụma a nwere nghọta - Wzọ asaa iji mepụta vidiyo na-egbu egbu - nke kwesiri inyere ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ihe okike aka ịkwụsị ọrụ vidiyo mbụ ha. Ihe omuma ahu na-ejeghari gi n’oru ndi di nkpa iji mepee vidiyo vidiyo gi.
Ndị a bụ usoro 7 iji mepụta vidiyo ahịa egbu egbu
Kpebisie ike na vidiyo gị ebumnuche na ndị na-ege ntị
Họrọ aka nri ụdị vidiyo content maka nzube gị
Debe ya obere
Etinye ya na gburugburu a ika akụkọ
Emela na-agwụ ike
Kpebie na ebe itinye vidiyo gị
Tụọ ma nyochaa arụmọrụ
Enwere m obi ekele na ha malitere site na ebum n'uche ha ma mechaa nyocha nke mbọ ahụ!
Tags: otúvidiyo vidiyoVidio Ahịaihe ndi ozooffshorenwezenzọụkwụyoutube
Nov 23, 2017 na 6:25 AM
Ihe vidiyo dị ezigbo mkpa n'oge a. Ma ghara ịbụ ihe na-agwụ ike dị ezigbo mkpa!